35 Responses to “ပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀”
ပျော်ရွှင်သော ဘ၀ဖြစ်ဘို့၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ လုပ်ကြတာပဲ၊ ကြိုးစားလိုက်နာဖို့လည်း လိုသေးတာတော့ အမှန်ပဲ၊ လောကီသားပေမို့၊ ၂၅ချက်ကိုမျှဝေပေးတာကျေးဇူးပါ၊
ဒီပို့စ်ကို ပရင့်ထုတ်ပြီး ရုံးမှာ ကပ်ထားရမယ် သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ ဝေမျှရာရောက်တာပေါ့. ဟုတ်ပါ့ဗျာ တခါခါ ဘာတွေကလွဲနေလို့ လွဲနေမှန်းကိုမသိ လူကပဲ မွန်းကြပ်လာသလိုလိုနဲ့ စိတ်ရှုပ်ရတဲ့ ရက်တွေများလာတယ် ကျေးဇူးပါ အကျိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးအတွက် ။
ကျေးဇူးပါ ပို့စ်လေး အတွက် တကယ့်ကို သိသင့်တာတွေ သိသွားရတယ် အချက်တော်တော်များများတော့ သမီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ဂလိုဆို ဟိ.... တာ့တာ ဒေါ်ရွှေချော
အချက် အလက် တွေ များ ပေမဲ့ရိုးရိုး ရှင်းရှင်း လေး တွေ မို့ 
တကယ်လိုက်နာကျင့် သုံး ရင် မဖြစ်နိူင်စရာ မရှိပါ .... လို့။
အဲ့ ဒီ ထဲ မှာ မယ်ဒီတေးရှင်း နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့် စဉ် လေးတွေ ပါနေလို့ 
ပိုပြီး နှစ်သက် ပါတယ် လို့။
သေချာလေးဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ မလိုက်နာဖြစ်တဲ့အချက်တွေထဲမှာ ၃ ၅ ၈ ၂၀ ၂၃ ၂၅ တွေကို တော့ မလိုက်နာနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်...
ကျန်တာတွေတော့ ပုံမှန်မဟုတ်တောင် အမြဲနီးပါး ကျင့်သုံးလုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်... လက်ခံတယ်ပေါ့... ၃ ၅ ၈ ၂၀ ၂၃ ၂၅ ကတော့ ရဘူး... တတ်နိုင်ဘူး....
ကျင့်သုံးဖို့ခက်ပေမဲ့ သိထားသင့်တဲ့အရာတွေပါ။ သိတဲ့အတိုင်းကျင့်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့လေ။
ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ မှတ်သားစရာ အချက် ၂၅ ချက်ထဲက ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အချက်တွေက အရမ်းနည်းလွန်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလို ဖတ်လိုက်ရတော့ သတိပေးသလို ဖြစ်မိတဲ့ အတွက် တော်တော်များများကို လိုက်နာ နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝ လေးဖြစ်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါအုံးမယ်ခင်ဗျ။ အခုလို မျှဝေပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
နံပါတ် (၃)အချက်ကိုတော့ တကယ်လိုက်နာပါ့မယ် မရီး..
(စတာနော်) တကယ်ဆိုလဲ စိတ်ဆိုးဘူး:P
တတ်နိုင်သမျှ လိုက်နာပါ့မယ်.။ ကိုယ်မသိ ကိုယ်မကျင့်ဖြစ်တာတွေ တော်တော်များသားလား။
(၈)၊(၉)၊(၁၂)၊(၁၃) တို့ကို မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဗျ ကြိုးစားကြည့်တာပေါ့..။ပျော်ရွင်တဲ့ ဘဝကိုမရရင် မချော ပြန်
ဟုတ်ပါတယ် ညီမချော ရေ
အဲဒီလိုအချက်လေးတွေ သတိထားပြီး လုပ်ဆောင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ညစာ စားတာတော့ လျှော့မရသေးဘူး အင်း မကောင်းတဲ့ အကျင့်ပေါ့
အတော်ကောင်းတဲ့အချက်တွေပါပဲ... မချောရေ....း)))
မမချောရေ.....အချက် ၂၅စလုံး ကော်ပီထားလိုက်ပြီ။
မချောရေ အချက်အားလုံးက တကယ်ကို လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေပါပဲ.. သေချာ မှတ်သားထားပါမယ်.. ကျေးဇူးပါနော်
အချက်တွေက များသာ၊ လွယ်ဘူးဗျ ...း)
-to reduce dinner
-to sleep7hoursaday
-to get up early in morning
Except them all i agree.A ma.:)
ပြောပါတယ် ..မချောရေးတဲ့ ဘလော့ တစ်ခုကိုဖတ်ပြီးသွားရင် အသိတစ်ခုတော့ရပါတယ်.
bike sales said...
မှတ်သားသင့် မှတ်သားထိုက်စရာလေးတွေပါဘဲ အားလုံးကောင်းပါတယ်
ဒါပေမဲ့မနက်စာ နေ့ လည်စာ ညစာ အကုန်လုံးတော့များများစားချင်တယ် :P
တော်တော်များများ သိလို့တော့ဟုတ်ဘူး.. ကိုယ့်တိုက်ပ်ဖြစ်နေတယ်။
စာထဲက အတိုင်းလုပ်နေရရင်တော့.. အတော်ပျင်းစရာကောင်းမှာ..
ဥပမာ။ ။နံပါတ် ၁၃
ချော ညီမကို ဖက်ခိုင်းရအုံးမယ် ၊ ရီတာကတော့ တော်တော်လေး ရီပါတယ် ။ သစ်သီးလဲ စားတယ် ငြိမ်သက်မှုကတော့ ဆင်ကိုသာကြည့်ပေတော့ ၊ တ ခုခုတော့ အမြဲတမ်းလှုတ်နေတယ် လာဖက်သွားတယ်
ချော ပြောတဲ့ အတိုင်းဇေက အကုန်လုပ်တယ် သစ်ပင်က ဒီမှာ မဆိုက်ဘူး ဟိုတုန်းက တအားစိုက်တယ် လမ်းဘေးတွေ တောင် မယ်ဇလီပင် ၁၈ပင်စိုက်ပေးဘူးသေးတယ် ၊ ၁၈နှစ်မွေးနေ့တုန်းက
ခိခိခိးးးးးးးးးးး ယမင်းကတော့အကုန်ကော်ပီလုပ်ထားလိုက်ပြီ။ မချော ရေးတာတွေကိုအကုန် ကြိုက်တယ်။ မချောရေများများရေးနော်။ မျှော်နေမယ်။
တော်တော် များများတော့ သဘောကျမိပါတယ်အစ်မ
အဲလို ဖြစ် အောင်လည်း ကျင့်ရ ဦးမယ်
၂၄ချက်လုံးကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန်ဖတ်တယ်။
တစ်ချက်ခြင်းကိုစစ်ပြီး မြသွေးနီဘယ်နှစ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီသလဲ စဉ်းစားလိုက်မိတော့..
ဘုရား..ဘုရား.. ၅၀% ကျော်ဖို့တောင်မလွယ်..။ ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ..။ ဒါနဲ့၁၀ချက်လောက်တော့ မဖြစ်မနေပြည့်အောင်ဆွဲဖြည့်လိုက်ရတော့တာပေါ့။ အချက်နံပါတ်(၃)ကတော့ အားလုံးထဲမှာ မဖြစ်နိုင်ဆုံးပါဘဲ..။ ၀ါး.... ပြောရင်း အိပ်ငိုက်တောင်လာပြီ..။ :)
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ comment ထဲ ဘယ်လိုရေးလိုက်မဟဲ့ လို့ စဉ်းစားနေတာ၊ နောက်ဆုံး စာပိုဒ်ဖတ်မိတော့မှပဲ စိတ်ပြောင်းသွားတော့တယ် :P
ဘ၀နေထိုင်ရေးအတွက် ဗဟုသုတဖြစ်စေတဲ့ ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးကို ကျွန်မသိပ်ကြိုက်တယ်။
နံပါတ်၅မှာပါတဲ့ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ ဂိမ်းမ်ဆိုရင်ဘာဂိမ်းမှမဆော့ချင်ဘူး။ စာဖတ်တာပိုကြိုက်တယ်။
၂၀မှာပါတဲ့ အချက်ကတော့ အတော့ကို ကြိုးစားမှရမယ်။
၂၅ ချက်ထဲမှာ ကိုက်ညီတဲ့ အချက်က တော်တော် နည်းနေတယ်။
Thanks so much. U also take care.
တစ်နေ့ကို လူသုံးယောက်ကို ပြုံးရွှင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ တစ်နေ့ကို လူသုံးယောက်ရှာပြီး မရီမချင်း ကလိထိုးမယ်..... :D
တကယ့်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ အကြံပေးချက်တွေပါ
လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမရတာတွေကိုတော့ လိုက်နာနိုင်အောင်
ကြိုးစားရပါမယ်။ ပြီးတော့ အစားအသောက်ပိုင်းပေါ့ ။ ဗိုက်အရမ်းစာတတ်တယ်